Tsy dia misy kely, na inona na inona, izay vaovao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Misy karazany vaovao ihany ny lohahevitra taloha, ny tsara kokoa ary ny ratsy kokoa noho ny farany. Ny zava-miaina rehetra dia mianatra amin'ny alalan'ny kopia, miaina am-pahendrena sy tsy misy herisetra avy amin'ny olona rehetra atrehintsika.
Ny olona malaza rehetra fantatrao dia nianatra ny asany tamin'ny alàlan'ny kopia ny hafa na naka hevitra efa misy ary manatsara na mampifanaraka azy io amin'ny asa mahomby sy mahasoa azy ireo - ny iray amin'izy ireo!
Ny tena trotraka eto dia ny mahita olona manao izay tadiavinao ary nahavita ny zavatra tianao hotratrarina - dia andramo ny zava-drehetra ataony. Ireo olona ireo dia afaka miaina na maty, ao amin'ny indostrianao na hafa raha toa ka misolo tena ny idealy & tanjona napetrakao ho anao. Halalino azy ireo sy ny fahazarany, ny fomba fiasany, ny teknikam-pihetseham-po, ny fomba fitondrany ny tenany amin'ny fiainana, ny zava-drehetra.
Tsy milaza aho fa lasa lohan-tsokosoko azy ireny saingy miasa mba hahatakatra ny asany ary hanaisotra azy ireo amin'ny fiainanao manokana. Mety ho hitanao fa mila mamorona olona maromaro avy amin'ny olona maromaro ianao, izay miara-mamorona ny mombamomba azy.
Ny olon-kafa dia manome fanazavana momba ny fomba hanatanterahany ny zavatra, jereo raha azonao atao ny manatsara ny sehatr'asa ataony. Miezaha hihaona amin'izy ireo raha toa ka eo an-toerana ianao, mametraka fanontaniana ary mihaino mafy ny valinteniny.
Ireto misy olom-panjakana any UK izay tokony hikaroka amin'ny aterineto;
Ranjan Bhattarcharya Ny Fanjakana Ampiasanao
Mark l'Anson Mpanoratra Tsara Indrindra "Manapaka ny Tany"
David Sandeman Essential Information Group-Mpifanaraka
Vanessa Warwick sy Nick Tadd Tribes
John Paul The Castledene Group - Real Estate Agent
Richard Bowser Property Investor News - Gazety
Susannah Cole The Company
Tom Entwistle Landland Zone (Bilaogy)
Mark Homer & Rob Moore - Fandrosoana Progressive
Daniel Wagner sy Dillon Dhanecha
Alefaso ny tsara indrindra!